အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: အိမ်ကို သတိရတဲ့ အခါ........
အိမ်ကို သတိရတဲ့ အခါ........
ဒီ ချိန်ဆို ...
အမေကတော့ ဘုရား ရှိခိုးနေမလား???
မြို့ ကလေး ကျဉ်းကျဉ်းလေးကနေ...
ကိုယ့်အတွက် အတွေးတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွေးရင်း
ကိုယ့်အတွက် ဆုတောင်းနေမှာ သေချာတယ်....
ဒီနေ့ ဘာအစီအစဉ် ရှိကြပါလိမ့်???
အင်း... ဘာ ဟင်းများ ချက်စားကြမလဲ မသိဖူး....
သြော်.... ကိုယ့် ကြိုက်တဲ့ ဟင်းကို ချက်ရင်း ကိုယ့်ကို သတိရနေပြန်ရော့မယ်...
ည.. ည.... တံခါးတွေ သေချာ ပိတ်ရဲ့လား???
ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်နေလား???
အင်း.. ကိုယ်လည်း ဂရုစိုက်ရမှာပဲ.....
မဟုတ်ရင်... အမေ... စိတ်ပူနေရော့မယ်....
ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေ့သစ်များ
ကိုယ် မပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေ့သစ်များ....ရယ်